Filazana: Boky Vaovao, Tranonkala sy Programa Nohavaozina
Boky Vaovao, Tranonkala sy Programa Nohavaozina
Boky roa no navoaka tamin’ny fivoriana isan-taona fanaon’ny fikambanana Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, tamin’ny 6 Oktobra 2018. Ny boky hoe Hanompo An’i Jehovah ny Tany Manontolo! ny iray, ary miresaka momba ny faminanian’i Ezekiela izy io. Ny bokikely hoe Miezaha Hahay Hamaky Teny sy Hampianatra kosa ny faharoa, ary natao hanampiana ny Vavolombelon’i Jehovah hahay hamaky teny sy hampianatra kokoa izy io.
Efa ao amin’ny jw.org sy JW Library ilay boky Hanompo An’i Jehovah, amin’ny teny anglisy, sy ilay bokikely Miezaha, amin’ny fiteny maromaro. Hivoaka amin’ny fiteny hafa koa ilay boky Hanompo An’i Jehovah any aoriana kely.
Nolazaina tamin’ny fivoriana fanao isan-taona koa hoe neken’ny Filan-kevi-pitantanana ny hanavaozana ny tranonkalantsika sy ny programa ampiasaintsika. Hiova àry ny endriky ny jw.org ka ho azo jerena ao koa ny zavatra ao amin’ny Tele JW sy ny FITEHIRIZAM-BOKIN’NY Vavolombelon’i Jehovah. Hovana koa ny endriky ny programa JW Library ka ho azo jerena ao izay zavatra ao amin’ny Watchtower Library sy ny zavatra tsy hita afa-tsy ao amin’ny jw.org amin’izao. Hitovitovy ny endrik’ilay tranonkala vaovao sy ilay programa vaovao ka vao mainka ho mora ampiasaina. Hotsorina, ohatra, ny zavatra tena fampiasa ao anatin’ilay tranonkala sy ilay programa, mba tsy ho sarotra tadiavina ny sakafo ara-panahy. Efa natomboka ny fikarakarana an’izany tetikasa lehibe izany. Tokony ho hitanareo ato anatin’ny volana vitsivitsy ny fiovana sasany.
Hizara Hizara Boky Vaovao, Tranonkala sy Programa Nohavaozina